Madaxweynaha Soomaaliya oo War cad kasoo saaray sida uu u arko in Soomaaliya xiligan laga qaado Cunaqabateynta Hubka	|
Madaxweynaha Soomaaliya oo War cad kasoo saaray sida uu u arko in Soomaaliya xiligan laga qaado Cunaqabateynta Hubka
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu sida ugu wanaagsan usoo dhaweynayaa go’aanka Golaha Amaanka ee Qaramada midoobay eek u aadan ka qaadista cunuqabeteynta hubka ee laga qaaday Dowladda Soomaaliya .
Madaxweynaha Xassan Sh. “Waxaa jirto xisaabtan iyo masuuliyad la socota go’aankaas.Golaha Amaanka Go’aankooda wuxuu si sax ah ula socdaa isbedelka cusub ee siyasadeed ee ka jira Soomaaliya.” Cunuqabateyntan ayaa Golaha Amaanka si qeyb ah uga qaadeen Dowladda Soomaaliya.
“Kumanaan Ciidamadda Xooga Dalka oo ay soo tababreen dalalka aan saaxibada nahay ayaa Soomaaliya dib ugu soo laabtay, nasiib daro qalab la’aan ayaa caqabad ku noqotay si ay howshooda u gutaan . Ciidamadaan ayaa si wada jir ah howlaha amniga ula fuliyo kuwa Midowga Afrika ee AMISOM”
“Dowladda waxey u mahad celineysaa Golaha Amniga , qadarintooda iyo fahamkooda,waxeyna Dowladda Soomaaliya masuuliyad iska saareysaa dhamaan sharciyadda iyo sharuudaha la socda go’aanka Golaha Amniga ay gareen, si waafaqsan nidaamka, kuna dhisan hufnaan”